Iloft eyodwa kwigadi yembali
Le yindlu entsha "yeziko" eyahlulwe kwindlu enkulu (apho sihlala khona). ibekwe phakathi kwegadi yembali. Yi-70m² enenqanaba lokwahlulwa, kwaye inikezela ngendawo yokuhlala yabantu aba-6. Inetafile yokutyela, ifriji, iTV, iWifi, kunye negumbi lokuhlambela elincinci, akukho khitshi. Isikhululo sikaloliwe sikwi-100 m kwaye sinikezela ngokuthe ngqo kwi-central Brussels kunye neLeuven (20min), uqhagamshelo lwesikhululo seenqwelomoya ngebhasi ngqo. Ifanelekile kubahambi bezoshishino, izibini, amaqela ( 6p kwigumbi le-1) kunye neentsapho ( amathoyizi ngesicelo).
Yiyunithi entsha yegadi enokufikelela ngokuthe ngqo egadini. Inika ubumfihlo obuninzi. Njengoko sihlala kwipropathi enye ikunika "unxibelelwano lwasekhaya" olugqibeleleyo. Kumgangatho wokuqala kukho iibhedi ezi-3 zokulala ezikumgangatho ophezulu, iTV, iNetflix kunye neWIFI entle. AKUKHO magumbi okulala ahlukeneyo. Kumgangatho womhlaba kukho itafile, ikona yekofu kunye negumbi lokuhlambela.
Indawo ifanelekile kuye wonke umntu othanda ukudibanisa indawo eluhlaza, ezolileyo evulekileyo kunye nokufikelela ngokuthe ngqo ngezithuthi zikawonkewonke kuzo zonke izixeko ezikhulu zaseBelgium. Kuphela i-100m ukuya kwisikhululo sikaloliwe kunye ne-busservice ngqo kwisikhululo seenqwelomoya. I-400m ukuya kwivenkile enkulu yasekhaya, i-1km ukuya kwezinye iindawo zokubhaka ezintle, iindawo zokutyela ezikumgama wokuhamba (10 min).
Ukuba kukho nantoni na enokwenza ukuhlala kwakho kukhululeke ngakumbi, vele ubuze. Yinto encinci ukuyenza njengoko sihlala ebumelwaneni. Ngesicelo ungasebenzisa ezininzi iithoyi kunye nemidlalo. Ayiboniswa kwiyunithi, njengoko undwendwe ngalunye luneprofayile eyahlukileyo.
Ukuba kukho nantoni na enokwenza ukuhlala kwakho kukhululeke ngakumbi, vele ubuze. Yinto encinci ukuyenza njengoko sihlala ebumelwaneni. Ngesicelo ungasebenzisa ezininzi iithoyi ku…